Sexual Reproduction | Reef Resilience
Ny famokarana lavanila vaovao dia zava-dehibe ho an'ny fikojakojana ny haran-dranomasina noho ny antony roa. Voalohany, mandritra izao vanim-potoana iainana izao dia mety hiparitaka sy hanangona toerana vaovao ny haran-dranomasina, hahazoana toerana vaovao izay mety ho tsara kokoa ny tontolo iainana amin'ny fitomboan'ny haran-dranomasina sy ny fivelomana. Faharoa, ny molekiola novolavolaina dia fomba tokana hanampiana ireo olona avy amin'ny genetika ho an'ny mponina, ka mamorona karazana toetra izay mamela ny haran-koditra hanova na hamaly ny fepetra amin'ny tontolo iainana amin'ny fomba samihafa. Mifanohitra amin'izany kosa ny fiterahana dia mamorona klônina ary tsy mampitombo ny fahasamihafana ara-piraisana.
Misy karazany roa lehibe ampiasaina amin'ny haran-dranomasina mba hamokarana volombava. Ny karazam-borona tena lehibe sy be dia be fampielezam-peo, izay mamoaka ny atody sy ny tsirilahy ao anaty tsanganana. Ny dingana manaraka eo amin'ny fampiroboroboana sy ny fivoaran'ny renirano dia mitranga eo ambonin'ny sehatry ny ranomasina. Karazana karazana hafa brooders, izay mameno ny ao anaty ao anatiny ary mamoaka ny taranany ho larva, izay dingana avo lenta amin'ny fampandrosoana satria vonona ny hipetraka tsy ho ela izy ireo rehefa avy nafahana. Ireo mpitsoa-pitenenana mivantana dia ireo karazana izay mitranga amin'ny alàlan'ny famonoana masomboly izay afaka manangona fahafaha-manao fanangonam-bokatra maro ho an'ny fiparitahan'ny renirano. Azo atao koa ny manangona larva ny fampielezankevitra, saingy ny karazan-trondro mbola kely dia manome tsiranoka kely kokoa amin'ny lanjany, izay tsara ho an'ny fikarohana, saingy tsy dia tanjona loatra ny famerenana amin'ny laoniny ny famerenana amin'ny laoniny.
Ny fampahalalana momba ny fomba fanabeazana aizana ny haran-dranomasina Karaiba dia hita ao amin'ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoKarazan-tsakafo Karaiba ary ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFampahalalana momba ny harena an-kibon'ny Coral Restoration Consortium's Larval Working Group.
Famaranana ny vatohara kintana boulder amin'ny famoahana ireo baraingo amin'ny gamete mandritra ny fandoroana vatomamy. Sary © Barry Brown / SECORE International / Wildhorizons.com
Ankoatra ireo fomban-doko roa ireo, ny coral dia mety ho hermaphroditika na gonochorique. Karazana heraphroditika miteraka atody sy tsirinaina miaraka amin'ny polyp tsirairay. Ny atody sy ny tsirinaina dia atambatra ao anaty amboara iray izay miaro azy ireo tsy hihalefaka mandritra ny minitra vitsy rehefa mitsingevana eny ambonin'ny rano izy ireo, ka ahafahan'izy ireo manangona mora kokoa.
Gonochoric karazana manana zanatany manana lahy samy lahy (ny zanatany lahy mamokatra tsirinaina ary ny zanatany vavy miteraka atody). Fanamby lehibe kokoa ny fanangonana gamety avy amin'ireo karazana ireo satria miempo haingana ao amin'ny tsanganana rano ny gametes, noho izany dia tsy maintsy atao haingana ny fanangonana. Ho fanampin'izay, tsy maintsy ataonao antoka fa ny lahy sy ny vavy dia soloina mandritra ny fanangonana, ka ny zanatanin'ny ray aman-dreny dia tsy maintsy fantarina alohan'ny fanangonana. Ny paikady tsara indrindra dia ny mankany amin'ny tranonkala misy zanatany maro karazana ary miambina mba hamaritana raha zanaky ny atody na sela sperma ny zanatany. Raha tsy mahazo miditra amin'ny zanatany vitsivitsy ianao dia makà santionany kely alohan'ny fiterahana mba hamaritana ny firaisana amin'ny zanatany.
Zava-ketsa maromaro momba ny vatohara (lahy) ao Gonochoric ao amin'ny ranon'i Curaçao. Sary © SECORE International / Benjamin Mueller
Ny tanjona voalohany dia ny mamaritra ny tanjon'ny tetikasan'ny famerenana amin'ny laoniny sy ny karazan-karazan-javamaniry tianao hotratrarina amin'ny fampielezan-janaka. Ity fampahalalana ity dia hamela anao hamantatra raha toa ny karazana dia mivatravatra, mpampitohy, hermaproditika, na gonochorique, ary mamantatra ny toerana misy ny haran-dranomasina miaraka amin'ireo zanatan-dreny ampy sy ireo fomba ilaina fanangonana haran-dranomasina.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFAHOROA - Broadcast Spawners
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSECORE - Mpivarotra
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoLahatsary - Coral Spawning